WARBIXIN: Barcelona Oo 10 Xiddig Oo Kooxdeeda Ah U Raadinaysa Koox Cusub – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Barcelona Oo 10 Xiddig Oo Kooxdeeda Ah U Raadinaysa Koox Cusub
Xiddigaha Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt & Antoine Griezmann ayaa ah xiddigaha ugu waaweyn ee ay Barcelona doonayso in ay ka soo muuqdaan xilli ciyaareedka cusub laakiin kooxda ayaa u baahan 265 milyan oo euro si ay ugu kharash garayso xiddigaaas.
Kooxda Barcelona ayaa suuqa u gali doonta Xiddig ay ku nasiso Jordi Alba iyo waliba badalka Goolhayaha 2-aad ee Jasper Cillessen kaas oo isaga tagi doona suuqa xagaaga.
Frenkie de Jong ayaa wakhti hore Barcelona qalinka ugu duugay heshiis 5 sano ah iyaga oo ka soo bixiyay 75 milyan oo euro halka ay De Ligt ku heli karaan lacag dhan 70 milyan oo euro iyo waliba lacag dhan 120 milyan hadii ay doonayaan saxiixa Griezmann kaas oo qirtay in uu ka tagi doono Barcelona.
Lacagta ay Barcelona haatan haysato ayaa ku filnaan karo saxiixa daafaca kooxda Barcelona sabab la xidhiidha faa,iidada kooxda ee sanadkii la soo dhaafay laakiin Barcelona ayaa u baahan 190 milyan oo kale hadii ay doonayso in ay la soo saxiixato xiddigo kale.
Marka laga yimaado Lionel Messi dhamaan xiddigaha kale ee kooxda ayaa ah qaar la iibin karo marka la gaadho xagaaga waxana ay Barcelona ka heli kartaa lacag aad u fiican.
Kooxda Barcelona ayaa suuqa dhigtay xiddiga reer Brazil iyaga oo madaxiisa dul dhigtay 100 milyan oo euro iyaga oo go,aasaday in ay iska iibiyaan kadib qaab ciyaareed aad u liita oo uu soo bandhigay.
Daafaca reer France ayaa Barcelona ka caawin kara imaatinka De Ligt iyada oo Barcelona diyaar u ah in ay 40 milyan oo euro ku fasaxdo xiddiga koobka adduunka kula guulaystay xulka France.
Barcelona ayaa suuqa dhigtay xiddiga reer Croatia laakiin Rakitic ayaa kalsooni weyn ka haysta tababaraha kooxda ee Ernesto Valverde si kasta ah ahaatee Barcelona ayaa xiddiga dul dhigtay lacag dhan 50 Milyan oo euro waxana jirta kooxo badan oo doonaya adeegiisa.
Goolhayaha reer Holland ayaa maamulka kooxdiisa ku war galiyay in uu doonayo in uu isaga tago kooxda si uu u raadsado koox uu joogto ugu ciyaaro waxana ay Barcelona dalbanaysaa lacag dhan 30 milyan oo euro.
Barcelona ayaa 41 milyan oo euro ka soo bixisay xiddiga reer Brazil mana doonayso in ay ku fasaxdo lacag yar inkasta oo uuna wakhti badan soo ciyaarin xilli ciyaareedkan.
Xiddiga ayaa haatan Amaah kula jooga kooxda Barcelona waxana uu soo qaatay xilli ciyaareed cajiib ah waxana doonaysa kooxda Tottenham waxana ay Barcelona dalban doontaa 20 ilaa 25 milyan oo euro.
Xiddiga ayaa suuqii January amaah ugu biiray kooxda Arsenal laakiin xiddiga ayaan kulamo badan u ciyaarin mustaqbalkiisana waxa ku jira shaki weyn laakiin lama qiimayn karo lacagta ay ku doonayso haatan.
Barcelona ayaa dhaqan galin doonta dookha 4-ta milyan ah ee ay kula wareegi karto xiddiga kadib waxa ay dib ugu iibin doontaa 10 milyan oo euro.
Daataca reer Portugal ayaa raadsan doona koox uu si joogto ah ugu ciyaaro xilli ciyaareedka dambe laakiin Barcelona ayaan doonayn in ay iska fasaxdo xiddiga inkasta oo uu xiiso waali ah helayo lacag dhan 35 milyan oo euro a ayaa Barcelona ku qancin doona in ay iska fasaxdo xiddiga
Waxa la filayaa in uu isaga tago kooxda laakiin Barcelona ayaan filayn in ay lacag fiican ku hesho marka loo eego in uuna xiddigan ciyaarin xilli ciyaareedkan intiisa badan sabab la xidhiidha dhaawac soo gaadhay.